ခေတ်သစ် မိဘအုပ်ထိန်းမှုက မိရိုးဖလာမိဘအုပ်ထိန်းမှုထက် ပိုကောင်းသလား? - Chit MayMay
Home Parenting ခေတ်သစ် မိဘအုပ်ထိန်းမှုက မိရိုးဖလာမိဘအုပ်ထိန်းမှုထက် ပိုကောင်းသလား?
ဘယ်မိဘကိုမဆို မေးကြည့်ပါ။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရတာက မလွယ်ကူကြောင်း ပြောပြကြပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး သူတို့ကို အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်အောင် ပုံဖော်ခြင်းက လွှမ်းမိုးနိုင်သလို၊ စိန်ခေါ်မှုများနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးက အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိဘတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလို မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယဝင်လာတတ်ကြပါတယ်။ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကလေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးကာ ပျံသန်းဖို့ အတောင်မစုံခင်အထိ သူတို့ကို လက်နဲ့ထွေးပိုက်ထားဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းရဲ့ အဓိကပုံစံနှစ်မျိုးမှာ ခေတ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုနဲ့ မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ် မိဘအုပ်ထိန်းမှုက ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတဲ့ မိဘတွေရှိသလို မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ မိဘတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့တစ်ခုချင်းစီက ဘာကိုဆိုလိုပြီး ဘယ်ဟာက သင်နဲ့သင့်ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုတာ ဘာလဲ?
မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ ကလေးတွေအပေါ် ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှု ပမာဏကို ကျင့်သုံးပါတယ်။ ဒီမိဘအုပ်ထိန်းမှု ပုံစံမှာ ကလေးတွေဟာ မိဘစကားကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ လိုက်နာကြရပြီး မိဘတွေကို သြဇာညောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ် မကြာခဏ တင်စားကြပါတယ်။ မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုရဲ့အဓိက focus က သားသမီးတွေကို မိမိတို့ခေတ်က မိဘတွေ ပြုခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ယုံကြည်ချက်နဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ကြီးကြီးမားမား အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ့် တာဝန်ကျေသော လူကြီးတွေ ဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိစ္စအများစုမှာ မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုကို လိုက်နာတဲ့ မိဘတွေက ချစ်တတ်၊ ကြင်နာတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော် သူတို့မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေဟာ နာခံမှုကို သေချာစေဖို့ အာဏာပါဝါနဲ့ စည်းကမ်းသဘောတွေ မကြာခဏ ပါရှိတတ်ပါတယ်။
မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းဘောင်တွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေ ပါဝင်လေ့ရှိပြီး လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်ပါက အပြစ်ပေးခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာအားလုံးကို ထည့်စဉ်းစားခြင်းဖြင့် မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုက flexible မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေးတွေ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက် နေရာအနည်းငယ်သာ ချန်ထားတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
ခေတ်သစ် မိဘအုပ်ထိန်းမှုဆိုတာ ဘာလဲ?
မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုနဲ့ မတူဘဲ ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုက ကလေးရဲ့ခံစားချက်၊ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအပေါ် ပိုပြီးအာရုံစိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှု၊ မကြိုက်မှုတွေကို ခံစားခွင့်ရှိသူတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုစနစ်က ကလေးအပေါ် မူတည်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ flexible ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ စည်းဘောင်တွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော် ကလေးက လိုက်နာဖို့ ပျက်ကွက်ရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အဲဒီအစား မိဘတွေက ကလေးဘာ့ကြောင့် မလိုက်နာနိုင်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါတယ်။ အကျိုးဆက်တွေ ရှိလာမယ်ဆိုတာကို ကလေးအား နားလည်စေပါတယ်။
ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုကို လိုက်နာတဲ့မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေက သူတို့ကို ကြောက်ရွံ့ရမယ့်အစား လေးစားသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖော်ပြခွင့်၊ စူးစမ်းခွင့် ရှိသင့်တယ်လို့လည်း ယူဆကြပါတယ်။
မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ ဘယ်အရာက မှန်လဲ?
မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုက စစ်ကျောင်းနဲ့ တူတယ်လို့ ထင်ရသော်လည်း အမှန်က ဒါဟာ စည်းကမ်းနဲ့ တာဝန်ယူမှုသဘောကို ပြဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို authority လေးစားဖို့၊ စည်းကမ်းလိုက်နာဖို့ နဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ အသိစိတ်ရှိသော နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် ကြီးပြင်းလာဖို့ သင်ကြားပေးပါတယ်။
မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုရဲ့ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော ကလေးတွေဟာ အများအားဖြင့် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကြပြီး ပညာရေးရဲ့ အရေးပါမှုကို အမြင့်ဆုံးဦးစားပေးထားပါတယ်၊ သူတို့အား ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်မှာ မလေးစားမှု၊ ဝုန်းဒိုင်းကြဲမှုနဲ့ လက်မခံနိုင်စရာ အပြုအမှုတွေကို သည်းမခံနိုင်ပါဘူး။ ကြီးပြင်းလာတာနှင့်အမျှ ဒီသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေက ကလေးတွေနှင့်အတူ ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ ဘယ်အရာက မှန်လဲ?
ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုက မိရိုးဖလာမိဘအုပ်ထိန်းမှုထက် များစွာပိုပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမိဘတွေဟာ ကလေးတစ်ဦးစီက ထူးခြားကြောင်း နားလည်ကြပြီး သားသမီးအတွက် အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ parenting ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်က ကလေးတွေကို အမှားလုပ်ခွင့်ရှိသူတွေလို့ မြင်ကြပြီး သူတို့အမှားလုပ်မိတဲ့အခါ ကျရှုံးမှုကနေ သင်ခန်းစာယူဖို့ အခွင့်အရေး ပေးထားကြပါတယ်။
ဒီမိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတဲ့ ကလေးတွေဟာ လွတ်လပ်မှု၊ တွေးခေါ်မှုနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါတယ် ။ သူတို့ကို ခေါင်း၊ ပန်း နှစ်ဖက်စလုံးကို ကြည့်တတ်ဖို့ သင်ကြားပေးပြီး စာနာမှုက လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ကို စာနာစိတ်၊ သည်းခံစိတ်ရှိတဲ့ လူကြီးတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
မိရိုးဖလာနှင့် ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုရဲ့ အားနည်းချက်တွေ
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲအ့တိုင်း မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုက အရမ်းတင်းကျပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒီပုံစံဖြင့် ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ရှက်တတ်လေ့ရှိပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထုတ်ဖော်ပြောရမှာ ကြောက်ရွေ့တတ်ကြပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရာမှာလည်း ရုန်းကန်ရနိုင်ပါတယ်။ မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုကနေ uninvolved parenting သို့ပြောင်းလဲသွားဖို့ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးမှာ မိဘတွေက စာနာမှုကင်းမဲ့ကာ သားသမီးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လျစ်လျူရှုပြီး သူတို့နဲ့ ကျန်းမာတဲ့ နှောင်ကြိုးကို တည်ဆောက်ဖို့ ပျက်ကွက်တတ်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုရဲ့အားနည်းချက်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ ကလေးတွေအား အလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်တဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် အလွန်အကျွံပေးတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီမိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံက စည်းတွေ၊ ဘောင်တွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေ မရှိတာမျိုး ဦးတည်တဲ့ အထိန်းအကွပ်လျော့ရဲတဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အပြုအမှုနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မထိန်းညှိပါက ကလေးတွေဟာ ရေရှည်မှာ အပြုအမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ကင်းမဲ့နေနိုင်ပြီး ကလေးရဲ့ ကြီးပြင်းလာမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံတစ်ခုစီမှာ ဘယ်အရာတွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ ယခုသိကြပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်အရာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့ လွတ်လပ််စွာ ကောက်ချက်ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်နဲ့ မိရိုးဖလာ မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ။ ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်၊ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ဆန္ဒတွေရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ပေးထားပါတယ်။ ခေတ်သစ်မိဘအုပ်ထိန်းမှုမှာ မိရိုးဖလာမိအုပ်ထိန်းမှုလိုပဲ ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးတွေကို ကြမ်းတမ်းစွာ မဆက်ဆံပဲစည်းကမ်းနဲ့ တာဝန်ယူမှုကို သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။
Previous articleမိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပူပန်မှုတွေကိုပါ ဘယ်လို ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲ?
Next articleနေ့ရက်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်အားတက်ကြွမှုကို ပေးနိုင်သော ပျော်ရွှင်ကလေးတစ်ယောက်ကို ပျိုးထောင်နည်း